Sidee u shaqeeyaan safaaradaha ku soo badanaya Somaalia?
Monday October 08, 2018 - 08:21:27 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa shalay waxaa uu warqadaha aqoonsiga safiirnimo ka guddoomay danjirayaasha Dalalka France iyo Germany.
Waxaa ay qeyb ka yihiin tiro badan oo safiirro ah oo ay waddamada Caalamka u soo magacaabayaan Soomaaliya.
Inta badan safiirradaas malaha safaarado ay ku shaqeeyaan,waaxana ay badankood xafiisyo kooban ku dhex leeyihiin xerada Xalane ee Magaalada Muqdisho,halkaas oo ah saldhigga ugu weyn ee AMISOM,ayna degganyihiin Wakiillada Caalamka.
Saddex iyo Toban Safaaradood oo ay ka mid tahay tii Iraan ee xirantay ayaa ka mid ah kuwa ka jira Muqdisho, waxaa kale oo jira kuwo la qorsheynayo in dhawaan laga furo.
Dalalka ilaa hadda safaaradaha ku leh Muqdisho ee ku dhex shaqeeya Xalane ama meelo u dhow waxaa ay kala yihiin; Turkiga, Itoobiya, Jabuuti, Kenya, Uganda, China,Suudaan, Imaaraadka,Liibiya, Qadar, UK iyo Yemen,waxaana xirantay safaaraddii Iraan.
Kaliya Safaaradda Turkiga ee Muqdisho ayaa la xaqiijiyay in ay bixiso adeegyada sida fiisooyinka iyo waxyaabaha la midka ah,safaaradaha qaar ayaa dhex deggan Hoteello ku yaalla Magaalada,halka kuwo kalena ay degganyihiin dhismayaal aad amaankooda loo adkeeyay.
Kuwa qorsheysan waxaa ka mid ah; Canada, Kuwait, Mareykanka,Pakistan, Koofurta Kuuriya, iyo Masar,waxaana xisid mudan in xitaa kuwa furan aysan lahayn Qunsuliyado qabta adeegyada ay u baahanyihiin muwaaddiniinta labada dhinac.
Waxaa kale oo jira kuwo ku shaqeeya dalalka deriska ah islamarkaana isku qabta shaqada safaaradda waddanka ee dalka ay ku taallo iyo Soomaalliya,waxaana ka mid ah; Bulgaria, Cameroon, Czech Republic, Georgia, Indonesia, Lesotho, Mali, Mexico,Portugal,Senegal, Argentine, Brazil, Belgium, Frnace , Germany ,Koofur Afrika, iyo kuwo kale, waxaana ay ku kala yaallaan Adis ababa iyo Nairobi.
Safaaradaha ka furan Muqdisho qofkii Soomaali ah ama xitaa qof kale ee ugu baahda baahiyaha saafaaradaha waxaa uu ku qasbanyahay in uu tago dalalka deriska ah halkaas oo ay adeegyada ka bixiyaan.
Waxaa ugu dhow fiisaha oo ay tahay in ay bixiyaan Qunsuliyadaha safaaradaha iyaguna maba jiraan,waxaana qofka uu ku qasbanyahay qunsuliyadda ugu dhow ee dalka uu fiisahiisa doonayo in uu tago.
Caqabadaha ugu badan waxaa ay heystaan dadka Qurbe joogta ah,kuwa ajaanibta ah ee ka shaqeeya Soomaaliya iyo dadka kale ee siyaasiyiinta ama Ganacsatada ah.
Waxa ugu badan ee ay dalalkaas qusuliyadahooda u furan la’yihiin waa arrinta amaanka oo ay dowladda Federaalka ah ku bixiso miisaaniyad xoog leh,haddana aan lahayn isbeddel dhinaca amaanka ah.
Maxey kula tahay in lagu xallin karo?.